U Gambira: April 2008
(from Burma Digest )
In BURMA DIGEST poll for Person of the Year 2007 (Burma), we got hundreds of direct votings on the website, and many more thousands of votes sent via email. U Gambira, and his fellow monks, who led Burma’s Saffron Revolution in 2007 got highest number of votes; and accordingly, named here as “The Person of the Year 2007 in Burma”.
Cry, Beloved Burma by - U Gambira and Ashin Nayaka, 2007 Nov, 19
Burmese Monks’ Leader Speaks From Hiding , 2007 October 18
Arrests continue despite Pinheiro’s visit , 2007 November 13
Faces of 2007: Pro-Democracy advocates
Posted by :) at 8:20 PM0comments
အရှင်ဂမ္ဘီရအား လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ဆုချီးမြှင့်
(photo; http://www.ko-htike.blogspot.com/ )
စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီးရဲ့ ဦးဆောင် သံဃာတပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရကို ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်တဲ့ Index on Censorship မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့ကြီးကနေ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ဆုကို ဧပြီ ၂၂ရက် အင်္ဂါနေ့က ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုကို လန်ဒန်မြို့က သာသနာ့ရံသီ ကျောင်းတိုက်က ဆရာတော် ဦးဥတ္တရက လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆုဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ့်ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ရဖို့အတွက် အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို နိုင်ငံတကာကနေ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်လိုက်တာပါ၊၊
အထူးသဖြင့် ပြည်သူတွေ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းနေတာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ စစ်အစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာသံဃာတော်တွေဟာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကနေ လမ်းမတွေ ပေါ်ထွက်ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ တအံတသြ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလို သံဃာတော်တွေကို ဆုချီးမြှင့်တဲ့အတွက် အားတက်ခဲ့ရပြီးတော့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆုကို ကိုယ်စားလက်ခံယူခဲ့တဲ့ လန်ဒန်မြို့ သာသနာ့ရံသီ ဝိဟာရ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရက အခုလို မိန်ကြားပါတယ်။
ဦးဥတ္တရ။ ။ 'မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ သံဃာတော်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းကြတဲ့ ဒီလုပ်ငန်းတခုကလေးတင်တောင်မှ ကမ္ဘာ့ ပြည်သူပြည်သားတွေက အားလုံး
လူသားချင်း စာနာတဲ့အတွက်ကြောင့် အားပေးကြသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူသားအားလုံးအတွက် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ ဒီသံဃာတော်တွေကနေ ဦးဆောင်ပြီး ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာဟာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူပြည်သားတွေကပါ ဒီလို အားပေးနေပါကလားဆိုတာကို ဘုန်းကြီးတို့ စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို ခံစားမိပြီးတော့ ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဟာ ဒို့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဟာ မုချ အောင်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ စိတ်ထဲမှာ ထက်ထက်သန်သန်နဲ့ တကယ့်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ပါတယ်။'
Index on Censhoship မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့ကြီးကနေ နိုင်ငံတကာမှာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေကို နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by :) at 8:12 PM0comments
ဦးဂမ္ဘီရနှင့် မြန်မာသံဃာတော်များ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆု ချီးမြှင့်ခံရ
ဧရာဝတီ ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး၏ ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးဖြစ်သည့် အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် မြန်မာသံဃာတော် များအား အင်္ဂလန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Index on Censorship မဂ္ဂဇင်းက လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆုကို ချီးမြှင့်လိုက် ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော သံဃာတော်များဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးသည် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များ အာရုံစိုက်စရာဖြစ်စေခဲ့သလို ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရ သည်လည်း ၎င်းလှုပ်ရှားမှုတွင် အဓိကကျသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော ကြောင့် ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယမန်နေ့ညနေက လန်ဒန်တွင်ပြုလုပ် သည့် ဆုပေးပွဲ၌ု Index on Censorship မဂ္ဂဇင်း၏ တာဝန်ခံကပြောဆိုကြောင်း ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်က ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆုကို လန်ဒန်မြို့ရှိ ဆရာတော် ဦးဥတ္တရနှင့် ဘလော့ဂါ ကိုထိုက်တို့က လက်ခံရယူခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဆရာတော် ဦးဂမ္ဘီရသည် ရန်ကုန်တိုင်း ရဟန်းပျိုအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်ဆရာတော်တပါးလည်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ အတွင်းက အာဏာပိုင်တို့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရအား စစ်အစိုးရက အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီချုပ်နှောင်ထားသည်။ အဖမ်းခံနေရသည့် ကာလအတွင်း ၌ပင် ဦးဂမ္ဘီရသည် မေတ္တာပို့ဆုတောင်းခြင်းကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များ စစ်ကျွန်ဘ၀သို့ မရောက်ရလေအောင် စစ်အစိုးရ၏ အခြေခံဥပဒေအား မထောက်ခံကြရန် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ရသည့် မိသားစုဝင်များမှ တဆင့် ပြည်သူလူထုကို ပန်ကြားခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ပါတီက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေအရ တားဆီးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရသူများနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရခြင်းမရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရသူများသည် ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေအရ မဲပေးခွင့် ရှိသူများဖြစ်သည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၎င်းကြေညာချက်တွင် “ဤပုဂ္ဂိုလ်များသည် မဲစာရင်းတွင် ၎င်းတို့၏အမည် ပါဝင်ရန်လည်းကောင်း၊ ဆန္ဒမဲပေးရန်လည်း ကောင်း၊ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များအရ အာဏာပိုင်တို့၏တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
စစ်အစိုးရက သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ စိတ်ပေါ့သွပ်နေသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာဥပဒေကပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း သတ်မှတ် ခြင်းခံရသူများ၊ ပြစ်မှုတခုခုကြောင့် တရားရုံး၏အမိန့်စီရင်ချက်အရ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူများ၊ ပြည်ပသို့တရားမ၀င် ရောက်ရှိနေသူများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများအား မဲပေးခွင့်မရှိကြောင်း ဥပဒေပြဌာန်းထားသည်။
Posted by :) at 7:02 AM0comments
U Gambira's remark on Junta's constitution
အရှင်ဂမ္ဘီရက စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကန့်ကွက်
ဝ၈-ဝ၄-ဝ၈၊ အေးနိုင် DVB
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာ့တပ်ပေါင်းစု ခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရက နအဖရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ထောင်အာဏာပိုင်တွေကို မိန့်ကြားလိုက်တယ်လို့ အစ်မတော် မခင်သူဌေးက ပြောပါတယ်။
အင်းစိန်ထောင်အာဏာပိုင်တွေက အရှင်ဂမ္ဘီရကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွေး နွေးလိုကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ရက်ခန့်က ချဉ်းကပ်ခဲ့ရာမှာ အခုလိုဖြေကြားလိုက်တာလို့ အရှင်ဂမ္ဘီရနဲ့ ထောင်ဝင်စာတွေ့ခဲ့တဲ့ မခင်သူဌေးက ပြောပါတယ်။
မတ် ၃၁ ရက် ယမန်ထပ်ယူရမယ့်ရက်မှာ မယူတဲ့အတွက် ပြောဆိုရာမှာ အဲဒီလိုပြောလိုက် တာလို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒီ Referendum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ ဦးဇင်းတို့ကို အတင်းဆွေးနွေးခိုင်းတယ် တဲ့။ ဆွေး နွေးခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့။ ဦးဇင်းကို ဆွေးနွေးခွင့်တောင်းတယ်။ ‘မင်းတို့ချမှတ်ထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေတွေကို ငါက မထောက်ခံဘူးကွ။ အဲဒီတော့ ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး’လို့ ပြောလိုက်တယ် တဲ့။ “သူတို့က ဒါဆိုရင်လည်း ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ Yes or No တခုခုပေးပါ တဲ့။ မဟုတ်ပါဘူး တခုခုတော့ ပြောကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ ဒါဆိုရင်လည်း No ပေါ့ကွလို့ ပြောလိုက် တယ်တဲ့။ ဦးဇင်းက ငါက Yes ဆိုရင်လည်းမင်းတို့က ထောက်ခံမှာ No ဆိုရင်လည်း မင်းတို့ Constitution ကို ထောက်ခံသလိုဖြစ်နေမှာမို့လို့ Yes လည်းမပြောနိုင်ဘူး No လည်း မပြောနိုင်ဘူး လို့ ပြောတယ်။ ”
အာဏာပိုင်တွေက အရှင်ဂမ္ဘီရကို ပုဒ်မ ၅(ည) အရေးပေါ်စီမံချက်အက်ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ တရားစွဲ ထားပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ရမန်မယူဘဲ စစ်ကြောရေးပြန်ဝင်နေတယ်လို့ အရှင်ဂမ္ဘီရက မိန့် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထောင်တွင်းမှာ အတင်းအကျပ် လူဝတ်လဲလိုက်တဲ့ သံဃာတော်တွေကို အာဏာပိုင်တွေက မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတာကိုလည်း အရှင်ဂမ္ဘီရက ပယ်ချခဲ့ပြီး ကျန်သံဃာတွေအပေါ် အတင်းအကျပ် လုပ်ရင် အိုင်အယ်လ်အိုထံ တိုင်ကြားဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
“ဘုန်းကြီးတွေကို လူမှတ်ပုံတင်လုပ်ခိုင်းတယ်တဲ့၊ အထဲမှာလေ။ ဦးဇင်းကလည်း သူ့မှာ သာသနာဝင် မှတ်တမ်း ရှိတယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် တဲ့။ လုပ်စရာမလိုဘူးလို့ ပြောလိုက်တယ် တဲ့။ ဦးဇင်းက စိတ်ပူလို့တဲ့ သီးသန့်ဘက်က ဘုန်းကြီးတွေကို သွားပြီးတော့ ပြောပေးပါဦး တဲ့။ လူကြုံနဲ့ မှာပေးပါဦး တဲ့။ အရင်တပတ် တနင်္လာကတည်းက မှာခိုင်းတာ။ အတင်းအကျပ် လုပ်ခိုင်းသလားပေါ့။ အတင်းအကျပ် လုပ်ခိုင်းတယ် ဆိုရင်တော့ ဒါ အိုင်အယ်လ်အိုကနေ တိုင်ပေးဖို့ပေါ့။”
ထောင်တွင်း မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းဝတ်ပြုမှုကိုတော့ ပုံမှန် ဆက်လုပ်နေကြတယ် လို့လည်း မခင်သူဌေးက ပြောပါတယ်။ အရှင်ဂမ္ဘီရ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ လလယ်ပိုင်းကစလို့ ထောင်ဝင်စာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ခွင့်မပေးဘဲ တဦးနဲ့တဦး မှန်ကာထားပြီး အစောင့်အရှောက်တွေအောက်မှာ တယ်လီဖုန်းနဲ့သာ စကားပြောခွင့်ပေးတယ်လို့ မခင်သူဌေးက ပြောပါတယ်။
အရှင်ဂမ္ဘီရဟာ မနှစ်က စက်တင်ဘာ သံဃာဆန္ဒပြပွဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ သံဃာခေါင်းဆောင်တပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲနောက်ပိုင်း တိမ်းရှောင်နေရာက မန္တလေးတိုင်း စဉ့်ကိုင်မြို့မှာ အဖမ်းခံရပြီး အင်းစိန်ထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ခံရကာ တရားစွဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by :) at 12:20 AM0comments